लोकनारायण सुवेदी भन्छन् – ‘नेकपा’ नाममा तानातान भयो, कट्टेल बेच्ने बारगेनिङ्गमा लागे « Sansar News
लोकनारायण सुवेदी भन्छन् – ‘नेकपा’ नाममा तानातान भयो, कट्टेल बेच्ने बारगेनिङ्गमा लागे
१४ माघ २०७८, शुक्रबार १५:१७
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको एकतासँगै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चर्चा चुलियो । गुमनाम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई नै देखाएर सर्वोच्च अदालतले डबल नेकपालाई विघटन गरिदियो । कट्टेल नेतृत्वको नेकपा डबल नेकपाको विघटनसँगै चर्चामा आएको थियो ।
डबल नेकपाको विघटनसँगै अत्याधिक चर्चा र महत्व बटुलेको कट्टेल नेतृत्वको नेकपाभित्र भने त्यहि चर्चा र महत्वले विवाद जन्मायो । अहिले तत्कालिन समयदेखि उठेको विवाद पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ । चर्चामा रहेका ऋषि कट्टेललाई नै पार्टीभित्रको बहुमत समूहले कारबाही गरेको छ ।
अध्यक्ष कट्टेललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि कारबाही गरिएको सन्दर्भमा संसार न्यूजका सन्देश अर्यालले अर्को पक्षका नेता लोकनारायण सुवेदीसँग केही जिज्ञासा राखेका छन् । विभाजनसँगै नेकपाकाे कार्यबहाक अध्यक्ष बनेका सुवेदीसँग पछिल्लो नेकपा विवादबारे गरिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश :
तत्कालिन डबल नेकपामा जस्तै एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने श्रृखंला तपाईँहरुको नेकपामा पनि देखियो । पार्टी अध्यक्षलाई नै निष्कासन गर्नुको कारण ?
ऋषि कट्टेल जीले पार्टी नै सिध्याउने गरी गतिविधि गर्नुभयो । सम्मेलन नै भाँडेर पार्टी कब्जाको योजना बनाउनु भयो । चैतको पहिलो साता बैठक बसेर सम्मेलनलाई पूर्णंता दिने योजना बनिरहेका बेला उहाँले सम्मेलन नै नर्गदै पार्टी सिध्याउने योजना सार्नुभयो । उहाँले आफुँ अध्यक्ष भएपछि सबै कुरा गर्न मिल्छ भन्ने ठान्नुभयो । उहाँले विरोधी सबैलाई निष्कासन गरेर आफुँ मनमौजी पार्टी चलाउने ओली पारा अबलम्बन गर्नुभयो ।
यो कुनै व्यक्तिलाई कारबाही गरेको होइन । केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यले पार्टी जोगाउन लिएको निर्णय हो । यो पार्टी सदस्यहरुको निर्णय हो ।
पार्टी विधानअनुसार सदस्यले अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने कि अध्यक्षले सदस्यलाई कारबाही गर्ने ?
हाम्रो विधानमा त्यस्तो छैन । अध्यक्षले स्पष्टीकरण सोध्न परे पनि केन्द्रीय सचिवालय वा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनु पर्छ । जसले स्पष्टीकरण सोध्ने हो उसैले न्याय दिने हो भन्ने छ हाम्रो विधानमा । केन्द्रीय समिति बाहेक अन्यले कारबाही गर्न पनि पाउँदैन ।
अर्को तर्फ बहुमत सदस्यको निर्णय हो । यो कुनै समूह पक्षले गरेको निर्णय होइन ।
तपाईँहरुले गरेको कारबाहीमाथि स्वभाविक प्रश्न उठेको छ । के सम्मेलन आयोजक कमिटीले अध्यक्षलाई नै कारबाही गर्न मिल्छ ?
जुन कमिटी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ, त्यसलाई विस्थापित गर्न अर्को कमिटी चाहिन्छ । पुरानो हटाउन नयाँ चाहियो । नयाँ नभई पुरानो नै कायम रहन्छ । पुरानो हटाउन नयाँ कमिटी बनेको भनेर दिनुपर्यो । केन्द्रीय समितिको बैठकले दिने हो । कुनै व्यक्तिले जथाभावी निर्णय गर्न पाउँदैन । पार्टीको विधान छ, राजनीतिक दलको दफाहरु छन्, त्योअुनसार पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ ।
त्यसकारण पुरानो केन्द्रीय समिति नै कायम छ । त्यो कायम राखेरै हिँडेको हो । समझदारी बनाएको चैतको पहिलो सातामा बाँकी रहेको राष्ट्रिय सम्मेलन समापन गर्ने भनेको हिँडेको तर, साथीहरु पार्टी विरोधी काम गर्ने अवस्थामा पुग्नु भयो । पार्टीको अध्यक्षलाई कुनै सदस्यलाई निष्कासन गर्ने अधिकार हुँदैन । विधानअनुसार त्यो केन्द्रीय समितिलाई मात्रै छ । केन्द्रीय समितिले पनि विधानअनुसार स्पष्टीकरण सोधेर दिएको वा नदिएको त्यो आधारमा निष्कासन गर्ने हो ।
एमाले र जसपामा देखिएको विवाद जस्तै नेकपाको विवाद पनि निर्वाचन आयोग पुग्ने त होला नि ?
निर्वाचन आयोगमा लफडा हुन सक्छ । ‘कानूनको नौ सिङ्ग’ हुन्छ भन्छन् त्यस्तो देखिन्छ । तर, हाम्रो विधान र निर्वाचन आयोगको ऐन धारा, ७३ अनुसार जाने हो भने केही पनि लफडा हुँदैन । विधान बाहिर गएर उफ्रिए लफडा त भैहाल्छ नि ।
नेपालमा ब्राण्डको पछाडि राजनीति चलेको देखिन्छ । अहिले कता–कता ‘नेकपा’ नाम हत्याउने खेलो पनि चलिरहेको चर्चा छ । के अहिलेको विवाद त्यहि विषयसँग जोडिएको हो ?
तपाईँले भनेको सही हो । अहिले कट्टेल जी पार्टीलाई नै बिलय गराएर केही हात पार्ने योजनामा हुनुहुन्छ । उहाँले टेलिभिजन कार्यक्रमबाटै सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको थियो ‘मलाई करोडौं रुपैयाँ दिएका थिए, मैंले गरिन’ । त्यो उहाँले बाहिर त भन्नुभयो तर, भित्र ‘साथी हो हामीलाई एकदमै ठूलो सूवर्णं मौका आएको छ, पुरानो ढर्राले चल्दैन, हामी सिंहदरबार, संसद, जताततै पुग्नुपर्छ, मात्रै नाम दिनुपर्यो, अरु सबै हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । त्यो रोकिएपछि उहाँमा छटपटी सुरु भएको हो । बाहिर त उहाँ निकै क्रान्तिकारी देखिनुभयो, ‘१०/२० करोडको अफर पनि आयो’ भन्नुभयो तर, वास्तवमा भएको विषय अर्के थियो ।
सिंहदरबारमा पुग्न पाइने, मन्त्री पनि पाइने जस्ता सपना देखेर कट्टेल जी बर्बराउन थाल्नुभयो । आफ्नाविरुद्धमा प्रश्न उठेपछि प्रश्न उठाउनेलाई नै कारबाही गर्ने तिर लाग्नुभयो । विवादको सुरुवात उहाँको पलाएको चरम महत्वकांक्षाबाट भएको हो । उहाँ नेकपा नाम नै बेच्ने बारगेनिङ्गमा लाग्नुभयो ।
सुरुदेखि नै चर्चा ओलीसँग कट्टेल नजिक भएको भन्ने थियो । के उहाँले ओलीलाई पार्टी बुझाउन खोजेपछि कारबाही गर्नुभएको हो ?
एमाले र ओलीको कुरा नगरौं । तर, के हो भन्दाखेरि उहाँले त्यो पार्टीको नाम दिए वापत १९/२० जना सांसद पनि पाउँछौं, उपप्रधानमन्त्री पनि पाउँछौं भनेर कुराकानी राख्नुभएको थियो । अर्को गम्भीर विषय उहाँ एक्लै यस्ता डिलहरु गर्न लाग्नुभएको थियो । तत्कालिन समय उहाँले एकलै रुपमा त्यस्ता डिलहरु गर्न थालेपछि हामीले विरोध गरेका थियौं । उहाँ जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा रहनु भएन ।
सिंहदरबारमा पुग्न पाइने, उपप्रधानमन्त्री पनि पाइने जस्ता सपना देखेर बर्बराउन थाल्नुभयो । सम्मेलनमा उहाँसँग बहुमत नभएपनि हामीले अध्यक्ष दिने योजना बनाएका थियौं तर, हाम्रो त्यो बुझाईलाई उहाँले कमजोरी ठान्नुभयो । आफ्ना विरुद्धमा प्रश्न उठेपछि प्रश्न उठाउनेलाई नै कारबाही गर्ने तिर उहाँ लाग्नुभयो । विवादको सुरुवात त्यहिँबाट सुरु भएको हो ।
कम्युनिष्ट ब्राण्ड बोक्ने पार्टीहरु ‘नेकपा’ नामप्रति निकै लालायित देखिन्छन् । विगतमा पनि नेकपा नामप्रति जोडिएर धेरै घटनाहरु घटाइएका छन् । यस्तो अवस्थामा नामको लडाईँ सामान्य होला र ? के बुझ्नुभएको छ ?
गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले, गौरवशाली पार्टी माओवादी केन्द्र ती गौरवशाली पार्टीलाई यो नाम किन चाहियो ? यो नामको आधारमा गौरव आर्जन भएको त होइन होला ? यो विषय गम्भीर छ । अरु त छोडौं विप्लवलाई समेत नेकपा चाहिएको छ । उहाँ माओवादी भन्न पनि छाड्नुहुन्न तर, उहाँलाई नेकपा नाम चाहिएको छ । यो लाजलाग्दो विषय छ ।
तपाईँले उठाएको चिन्ता निकै सही छ । अहिले भएको विवाद नै त्यही हो । यो नेकपालाई फेरि पनि हमला गरेर कब्जा गर्ने दाउ छँदैछ । हमला त अहिले होइन स्थापनादेखि नै भएको हो । यो एकदमै खतरानाक कुरा हो । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई तहसनहस गर्ने कुरा हो ।
यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने विषय, गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले, गौरवशाली पार्टी माओवादी केन्द्र ती गौरवशाली पार्टीलाई यो नाम किन चाहियो ? यो नामको आधारमा गौरव आर्जन भएको त होइन होला ? यो विषय गम्भीर छ । अरु त छोडौं विप्लवलाई समेत नेकपा चाहिएको छ । उहाँ माओवादी भन्न पनि छाड्नुहुन्न तर, उहाँलाई नेकपा नाम चाहिएको छ । यो लाजलाग्दो विषय छ । यो लाजको लडाईँले हामीलाई विभाजन गर्ने, हामीलाई सिध्याउने खेलो भईरहेको छ । यसमा सबैले बहस गर्न आवश्यक छ ।